नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नारीले लगाएको ढाका टोपी र टोपी दिवस !
नारीले लगाएको ढाका टोपी र टोपी दिवस !
- ध्रुव थापा , अमेरिका
तेश्रो अन्तरास्ट्रिय टोपी दिवसको अवरमा अहिले फेसबुक भरि टोपीको प्रदर्शन बढेको छ। देश बिदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले कमसे कम बर्षमा एकदिन नै भएपनिशिरमा टोपी लगाएर फेस्बुक मै भएपनि टोपी दिवस मनाउन थालेका छन् त्यो राम्रो कुरा हो। यसले हाम्रो टोपीको मात्र प्रचार र नगरेर सिंगो नेपाल र नेपालीको मान सम्मान सगरमाथा जस्तै अग्लो बनाएको छ। जसले पनि जुनै देशमा जादा पनि बोक्न सक्ने र चाहिएको बेला शिरमा लगाउन सक्ने यो टोपी , टोपी दिवसको लागी मात्रै नबनोस। अहिले युवाहरु मात्र होइन युवतीहरुपनि ढाका टोपी लगाएर फोटो खिचेर फेसबुकमा हाल्न आतुर देखिन्छन । जे होस् यो फेसबुकबाटै सुरु भएको अभियानले झन्डै अंग्रेजी नया बर्ष नै बिर्सने गरि फेसबुकको भित्ता भरिनै ढाका टोपीले प्रमुखता पाई रह्यो चाहे युवाहरु होस् वा युवतीहरु सबै ढाका टोपीमा गमक्क परेर नेपाली बनौ र नेपाली पनमा रमाऔ भन्दै आफ्नो
स्टाटस अपडेट गरि रहेका देखिए । १ जनवरी २०१६ भरिनै सबैलाई हतार देखिन्थ्यो कतै आफ्नो ढाका टोपी लाएको फोटो हाल्न ढिलो होलाकी भनेर । तर थोरैलाई थाहा होला सन् २०१३ को अक्टोबरतिर लन्डनमा अध्ययनरत गोरखाका रामचन्द्र मरहट्टा उर्फ मचराले यस अभियानको सुरुवात गरेका हुन् भन्ने बारेमा । सायद उनलेपनि सोचेका थिएनन् होला एति चाडो यो अभियान एति धेरै सफल हुन्छ भनेर। फेसबुकबाटै नेपाली टोपी दिवसको सुरुवात भएकोले अहिले फेसबुक भरि यसले प्रमुख स्थान पाउनु स्वाभाविकपनि हो र यो सोसियल मिडियाको करामतपनि हो। सायद चाडै नेपालमा यसले सरकारी स्तरमै मान्यता पनि पाउला। जे होस् अहिले हेर्दा यहि अभियानले गर्दापनि नेपाली टोपीको लोकप्रियता युवाहरुमा ह्वात्तै बढेको छ।